Archive du 20190603
Voka-pifidianana vonjimaika Hohajaina ny 15 jona
“Afaka roa herinandro ny famoahana ny voka-pifidianana vonjimaika amin`ny fifidianana solombavambahoaka”, hoy ny CENI.
Fiarahamonim-pirenena Raikitra indray ny antso avo ho an’ny filaminana
Nanao antso avo amin’ny vahoaka hilamina sy amin’ny manampahefana ary ny rafitra ara-pifidianana mba hanaja ny tsy fitanilàna ny sabotsy teo ny ivontoerana Safidy izay sehatra iray anaraha-maso ny fifidianana eto amintsika.
Adihevitra tato ho ato ny momba ireo Nosy Malagasy bodoin’ny Frantsay.
Ho vita ny Rovan’Antananarivo Ary ahoana ilay satroboninahitra very ?
Hovitaina mialoha ny fankalazana ny faha-60 taona nahazoana fahaleovantena ny 26 jona 2020 ny Rovan’Antananarivo,
Ny lalana sy ireo fotodrafitrasa maro efa vitan`ny fitondram-panjakana arahina amin`ny lafiny tsy fandriampahalemana ary fampananan`asa ho an`ny tanora no nasongadin`ny filoha Rajoelina nandritra ny fihaonana tamin`ireo Malagasy mpila ravinahitra mipetraka any Parisy Frantsa ny sabotsy lasa teo.
Raim-pianakaviana iray anisan’ireo mpifoka sigara nikoizana Rakotomanga Jonah.
F5 – FJKM andiany faharoa Fahombiazana tanteraka
Isan-taona no hanatanterahana ny hetsika F5 ho an`ny FJKM ka andiany faharoa ny sabotsy lasa teo.
Telma Coupe de Madagascar 2019 Lasan’ny Fosa Juniors Boeny indray
Norombahin’ny Fosa Juniors toy ny tamin’ny taona 2018 lasa indray ny amboaran’ny fifaninanana baolina kitra « Telma Coupe de Madagascar 2019 ».
Fanomanana ny CAN 2019 Barea Madagascar 3-3 Luxembourg
Nirava ady sahala 3-3 ny Barean’i Madagasikara sy ny ekipam-pirenen’i Luxembourg teo amin’ny lalaom-pirahalahiana fanomanan-tenan’ny ekipa Malagasy hiatrika ny CAN 2019 hotontosaina any Egypte manomboka amin’ny volana jona izao.
“Champions League” any Eoropa Norombahin’i Liverpool ny amboara 2018-2019
14 taona aty aorian’ny nandrombahany ny anaram-boninahitra farany dia voahosotra ho tompon’ny amboaran’ny “Champions League any Eoropa” indray ny ekipan’i Liverpool avy any Angletera.
Hand-ball Fifanintsanana « IHF TROPHY » Nampiarahana amin’ny “Zône 6” i Madagasikara sy Seychelles
Satria tsy mandray anjara i Comores sy Maurice izay “forfait” ao anatin’ny “Zône 7” aty Afrika eo amin’ny taranja Hand-ball izay misy an’i Madagasikara,
Atletisma Malagasy Nahazo fankatoavana tamin’ny AGO
Tontosa teny amin’ny INFRA Alarobia tamin’ny sabotsy 01 jona 2019 teo ny AGO “Fivoriambe ara-potoana” 2019 an’ny FMA
Miseho ny tena marina !
Saika manerana ny Nosy ny fijoroan’ny olona manohitra ny zavatra hitany sy tsapany fa tsy rariny noho ny hosoka na fanatsimbadihana safidim-bahoaka.
Omaly no nanatanteraka ny fihodinana faharoa tamin`ireo fifidianana monisipaly sy ara-paritra i Grèce.
Efa manomboka miakatra kely ny fanjifan’ny Malagasy ny vokatra vita avy amin’ny ronono eto amintsika amin’izao, raha araka ny fanazavan-dRandrianarivelo Niriavotra, tompon’andraikitra eo anivon’ny orinasa Socolait.
Natolotra an’i Madagasikara ny 31 mey 2019 tao amin’ny Muséum National d'Histoire Naturelle,
Ny nitsirian’ny hevitra namoronana ny Faritra Malalaka Ifanakalozana (Zone de libre échange continentale na ZLEC) dia ny fahitana fa sarotra ny manao fanambarana ara-kaba na ara-ketra « déclaration en douane » satria sady mandany vola no mandany fotoana.
Raha ny vaovao azo avy amin’ny mpitandro filaminana, mbola eo an-dalam-pikarohana ilay nahavanon-doza niteraka fampihorohoroana tamin’ny andron’ny fifidianana ireo manampahefana eny ifotony sy
Malaza ankehitriny ny fiteny hoe : “ IFOTONY” mba hambaboana ny vahoaka.